Otu esi etinye Cockpit na Debian 11 Bullseye - LinuxCapable
November 15, 2021 November 14, 2021 by Jọshụa James
Nhazi tupu wụnye maka kokpiiti
Nhọrọ - Hazie UFW Firewall maka kokpiiti
Otu esi emelite kokpiiti
Otu esi ewepu (wepụ) kokpiiti
N'ime nkuzi a, ị ga-amụta Otu esi etinye Cockpit na sistemụ arụmọrụ Debian 11 Bullseye gị.
Site na ndabara, Cockpit dị na ebe nchekwa ndabara. Agbanyeghị, dị ka ọtụtụ ngwungwu dị na kwụsiri ike nke Debian, n'oge na-adịghị anya ọ ga-adị anya n'azụ na mmelite. Nkuzi a ga-etinye Cockpit site na ebe nchekwa Debian Bullseye Backports, nke a na-emelite karịa ka ọ kwụsiri ike na-abanyeghị na mpaghara nnwale / akwụghị ụgwọ.
Nkuzi a ga-ejikwa APT Pinning, yabụ echefula ịnweta mmelite site na iji ọkọlọtọ apt update iwu ma ghara igbochi ngwugwu Debian 11 kwụsiri ike na ndabara.
Mbụ, mepee faịlụ mmasị dị ka ndị a:
Nchịkọta nke ihe ị gbakwunyere.
A na-eji ndabara eme ihe n'azụ azụ maka kokpiiti ngwugwu mgbe niile.
Ngwunye niile ga-eji Debian 11 Stable na ndabara.
Ndabere ga-abụ azụ azụ ma ọ bụrụ na ihe ọ bụla adịghị na kwụsiri ike.
Ugbu a, ị ga-achọ ịgbakwunye ma ọ bụ azụ azụ na nke gị /etc/apt/sources.list ọ bụrụ na ọ nọbeghị
Bubata Debian 11 “Bullseye” Backports:
Melite ebe nchekwa gị iji gosipụta mgbakwunye ọhụrụ.
N'oge ugbu a, Cockpit na Debian 11 ebe nchekwa kwụsiri ike dị 239 Version.
Backports nwere ugbu a 256 Version.
Ugbu a ị guzobela isi iyi ọhụrụ iji wụnye Cockpit na sistemụ Debian 11 gị, mebie iwu a na ọdụ gị.
Kwado ụdị arụnyere site na iji iwu amụma apt-cache.
Dị ka n'elu, ị rụnyere ụdị 256 site na Bullseye Backports kama nke ndabara 239 sitere na ebe nchekwa Bullseye nke ndabara.
Na-esote, nyochaa ọkwa nke Cockpit iji jide n'aka na ọ na-arụ ọrụ nke ọma na sistemụ gị:
Ọ bụrụ na etinyere UFW, jide n'aka na ị ga-ahapụ ọdụ ụgbọ mmiri 9090.
Dabere na mkpa gị, ị nwere ike ịchọkwu ịgbanyụ ya site n'ikwe ka adreesị IP nke ọ bụla n'ọdụ ụgbọ mmiri ahụ.
Na-esote, na ihe nchọgharị gị, pịnye adreesị ihe atụ na ọdụ ụgbọ mmiri 9090 na njedebe.
Ọzọ, ị ga-ahụ Cockpit nbanye, na nke a bụ gị otu sudo aha njirimara or mgbọrọgwụ aha njirimara na password- banye ka ịga n'ihu na dashboard.
Na-emekarị, ị ga-achọ iji iwu dị iche iche iji lelee mmelite sitere na ebe nchekwa backports. Nyere na ị na-eji APT pinning ugbu a, ị gaghị echefu n'ọdịnihu ịlele mmelite Cockpit.
Lelee maka mmelite maka Cockpit dịka ị ga-eme maka sistemụ gị niile.
Ma hazie nkwalite ahụ dịka ị ga-eji ngwugwu ndị ọzọ niile.
Maka ndị ọrụ ma ọ bụ ndị nchịkwa na-achọghị Cockpit na sistemu ha, mee iwu a.
Ụdị Y wee pịa Tinye igodo ịga n'ihu na mwepụ nke Cockpit.
Iwu a ga-ewepụ Cockpit na ndabere niile ejighi ya arụnyere na mbụ.
N'ime nkuzi a, ị mụtala otu esi etinye ma ọ bụ mee ka Cockpit na Debian 11 Bullseye jiri ebe nchekwa Bullseye-Backports.
N'ozuzu, Cockpit bụ nhọrọ magburu onwe ya maka ndị ọrụ iji kwado usoro ha ngwa ngwa. Emebere ya maka ndị ọrụ ọhụrụ nwere sysadmins n'uche yana ikike ijikwa ya n'ime ime. Ọ bụrụ na ị na-abanye na Linux, iji Cockpit ga-abụ nhọrọ siri ike n'ịghọta ka sistemu si arụ ọrụ na ịchọpụta okwu ngwa ngwa n'ime ọpịpị ole na ole.
Iji mụtakwuo maka uru na ndụmọdụ na aghụghọ ị nwere ike nweta na Cockpit, gaa na akwụkwọ gọọmentị.
Categories Debian Tags Cockpit, Nnenna 11 Bullseye Mail igodo